Esory ny angona avy amin'ny rakitra an-tsoratra miaraka amin'i PHP | Famoronana an-tserasera
Araka ny fantatsika rehetra, ny iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ny teknolojia sy ny informatika dia ny fampiononana, ary amin'ity tranga ity dia hiasa hatrany isika fahafaha-manao ho anay mpandahatra fandaharana.
Imbetsaka, ny fepetra fiarovana tsara indrindra dia ny fanaovana izay rehetra azo atao mba hahazoana antoka fa mitsidika ilay mpitsidika tsy fantatrao izay ataonaoAmin'izany no hialantsika amin'ny karazan-javatra marefo rehetra amin'ny Internet. Amin'izany fomba izany dia manome sosokevitra anao aho mba tsy hanarahanao ny torolàlana arahin'ny tsirairay rehefa mamorona pejy web ianao, fa kosa ianao manolotra ireo asa samihafa.
Ny iray amin'ireo faritra marefo indrindra amin'ny tranonkala dia ny tahiry, satria ny angona rehetra izay tehirizina, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia hotahirizina ao. Mba hidirana amin'ny tahiry dia ilainay ireto fampahalalana manaraka ireto:
Matetika ity fampahalalana ity dia miraikitra ao amin'ilay rakitra izay manatanteraka ny fampifandraisana amin'ny angona:
Na izany aza, toy ny mahazatra, misy fomba hafa anaovana zavatra, azontsika atao ny mitahiry ity angon-drakitra tena tsiambaratelo ity amin'ny rakitra hafa noho ilay iray izay manatanteraka ilay fiasa, ary avy eo fero ny fahazoan-dàlana mankany amin'ilay fisie.
Ho an'ity dia hampiasainay ny fiasa rtrim, fiasa ho an'ny esory ny angona avy amin'ny rakitra an-tsoratra mahazatra. Ny .txt dia tokony ahitana data iray isaky ny andalana, zavatra toy izao:
Ary hongotray ireo angon-drakitra voalaza avy eo, ao amin'ilay rakitra izay manao ny fifandraisana:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » PHP » Esory ny angona avy amin'ny rakitra an-tsoratra miaraka amin'i PHP